Thor Schrock: နောက်ထပ်သန်းကြွယ်သူဌေး? | Martech Zone
Thor Schrock: နောက်ထပ်သန်းကြွယ်သူဌေး?
တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 24, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
သူငယ်ချင်း Blogging, Thor Schrock, အဘို့အပြေး၌တည်ရှိ၏ နောက်ထပ်သန်းကြွယ်သူဌေး!
Thor သည်နည်းပညာရှင်များအတွက်လျင်မြန်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ငါ Thor နှင့်သူ၏ဘလော့ဂ်ကိုအဘယ်ကြောင့်အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသူသည်၎င်းကိုမြှင့်တင်ရန်ရန်လိုသော်လည်းသူ၏နှိမ့်ချမှုနှင့်ဖော်ရွေမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပေးလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကအမြဲတမ်းစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတာ၊
Thor သည်ကျွန်ုပ်ကိုယနေ့စာရေးပြီးသူသည်နောက်ထပ် Internet Millionaire ဖြစ်စေရန်သင်၏အကူအညီလိုအပ်သည်။ သူ့ပြိုင်ဘက်လား၊ မဟုတ်လားဆိုတာကသူ့အားထုတ်မှုနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကသူ့ဆီကိုသယ်ဆောင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
အဘို့အမဲ Thor Schrockနောက်ထပ်သန်းကြွယ်သူဌေး! ထည့်ရန်သေချာစေပါ Thor ၏ဘလော့ဂ် အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့စာဖတ်သူကိုမှ! ငါမူကားငါလာမည့်အင်တာနက်ရာထောင်ချီသောအင်တာနက်လိုင်းဖြစ်ရုံဖြင့်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
ငါ YouTubotato ပါ
ဇွန် 24, 2007 မှာ 2: 46 pm တွင်
Doug ၏ရေးသားမှုနှင့်ချီးမွမ်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကနေကျွန်တော်အများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။
ဇွန် 25, 2007 မှာ 10: 46 pm တွင်
26:2007 pm မှာဇွန် 8, 25
အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဟာနောက်ထပ် Millionaire ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြေးဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် Billionaire ကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီသောအခြားအတွေးအခေါ်များကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည့်အခြားသူများကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်ရန်အတွက်ငွေကိုအမြဲယူနေပုံရသည်။ ငါလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွေးတစ်ခုက Flash Slideshows ကအခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်။ ၎င်းကိုဒေါ်လာ ၁၀ သန်းနှင့်ဒေါ်လာ ၂၀ မီလီယံဖြင့် MySpace မှချက်ချင်း ၀ ယ်ယူခဲ့သည် - ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်! ခိုင်လုံတဲ့အတည်ပြုချက်ရကတည်းကငါစိတ်ကူးကိုတံခါးအပြင်ထွက်ချင်တယ်။ Yahoo လိုပြိုင်ဘက်များ။ သို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်သို့မဟုတ်မိုက်ကရိုဆော့ဖ် (ချက်ချင်းဖြတ်နိုင်သူများ !!)) ကိုစိတ်ဝင်စားသင့်သည်။ *
ငါ Thor ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုသေချာပေါက်မှာမယ်!
ရွှင်လန်း !! Billy;))
ဇွန် 26, 2007 မှာ 3: 59 pm တွင်
လူတိုင်း Thor အတွက်မဲထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ သူကလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော့် Next Internet Millionaire Big Action Podcast အတွက်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုပေးခဲ့တယ်။
သေချာတာပေါ့၊ သေချာကြည့်ပါ။ Thor ရဲ့ကြည့်ရှုခြင်းဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ ၁၀။ သူဟာကြီးမားတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပဲ၊